क्रान्तिमा राजाको उपयोग – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
क्रान्तिमा राजाको उपयोग
२०७१ श्रावण ३०, शुक्रबार ०१:३६ गते
राणाविरोधी क्रान्तिलाई राजाको नाममा गर्नुपर्ने जरूरी थियो, त्यसैले राजा त्रिभुवन दरबारमा हुन्जेल क्रान्तिको आरम्भ गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले, बीपीको सोचमा हेलिकप्टरबाट राजालाई भगाएर पाल्पामा लैजाने र त्यहा“बाट नया“ सरकार बनाएर त्यसलाई भारतबाट मान्यता दिन लगाएर क्रान्ति बढाउने योजना थियो । यो सम्पूर्ण योजनामा भारत, पाल्पाका कमान्डर इन चिफ, भारत र नेपाली कांग्रेस चारै पक्षको आपसी तालमेलको आवश्यकता थियो ।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस घटकको सम्बन्ध र सम्पर्क भारतसँग मात्र थियो, जसले यो सम्पूर्ण योजनामा हेलिकप्टर दिने र पाल्पामा गठन भएको सरकारलाई मान्यता दिने भन्ने थियो । पाल्पाको कमान्डर इन चिफ र राजासँग नेपाली कांंग्रेसको डेमोक्र्याटिक घटकका सुवर्णशमशेरहरुको मात्र सम्पर्क थियो । बीपी काठमाडौँ भएका बेला राजाका छोराहरुले भेट्न खोजेका थिए, तर भेटेनन् । सायद, सामान्य तरिकाले राजपरिवारले अरुलाई भेट्न श्री ३ को जगजगीमा त्यति सरल थिएन कि अन्य कुनै कारण थियो, त्यो भने भन्न सकिन्न ।
सुवर्णशमशेर सी क्लासका राणा थिए, त्यस्तै पाल्पाका कमान्डर इन चिफ पनि सी क्लासकै राणा नै थिए । यसैले, बीपीले दुवै सी क्लासबीच आत्मीय सम्बन्धको कल्पना गरेका हुन सक्छन् । आफूले उनलाई भेट्दाको प्रसंग परिच्छेद २७ मा उललेख गरेका छन । ‘माथि डा“डामा क्याम्प गरेर बसेका थिए । ती बडा रइस खालका मानिस थिए, राम्रा स्वास्नीमान्छेहरु लिएर बस्थे, धनी पनि थिए । म आउने भनेर झन् बढी, एउटा भोजैको जस्तो इन्तजाम गरेका थिए ।’ बीपीले उनीसँग भएका हजार–बाह्र सय बन्दुक आफूलाई दिनुपर्ने र राजालाई त्यहाँ ल्याइयो भने बस्ने इन्तजाम गरिदिनु पर्ने माग राखे । यसमा उनले स्वीकृति जनाउँदै भने– ‘सुवर्णजीलाई भन्दिनू, मलाई भर गरे हुन्छ ।’
सुवर्णशमशेरको सी क्लास र उनको सी क्लासमा फरक थियो । सी क्लास भए पनि उनले श्री ३ को विश्वास जितेका थिए र कमान्डर इन चिफ भएका थिए । भीमसशमशेरपछि उनका छोरानातिको रोल भर्खर काटिएको थियो र सी क्लासमा झारिएको थियो । सुवर्ण तिनै भीमशमशेरका नाति हुन् । पछि क्रान्तिमा भैरहवामा के. आई सिंहसम्म पु¥याउन पठाएको हतियार यिनै कमान्डर इन चिफका छोरानातिले नौतनवामै रोकेर के. आई. सिंहलाई केन्द्रीय नेतृत्वसँग विद्रोह गर्न विवश पारेका थिए ।
सुवर्णशमशेरहरुलाई पनि राजासम्म सीधै कुरा पु¥याउने सुविधा थिएन । कलकत्ताबाट राजाको निमित्त जाने चुरोटको सुर्ती झिकेर नेपाली कागजमा सन्देश लेखेर त्यसभित्र हालेर फेरि सिल गरेर पठाउनुपर्दथ्यो । यस्तोमा कार्यतालिकामा सही समय निर्धारण कसरी हुन सक्थ्यो, त्यसबारेमा चिन्ता गर्नै परेन । किनभने, भारतले हेलिकप्टर दिन अस्वीकार ग¥यो । पैदल भगाएर पाल्पा लैजाने टोली पक्राउ प¥यो । दुई प्रयत्न असफल भएपछि बीपीकै शब्दमा ‘राजा तर्से, यिनीहरुबाट यो हुँदैन भनेर ।’
भारतले आसन्न क्रान्तिमा आफ्नो भूमिका पहिल्याई सकेको थियो । ऊसँग मागिएका दुवै सहायता गर्दा लुकेर गर्न सम्भव थिएन । कुरा खुल्दा त्यसको औचित्य र भारतलाई त्यसबाट हुने फाइदा आफ्ना जनतालाई बुझाउनु नै पर्ने थियो । त्यसैले, भारतले खुलेरै काम गर्ने नीति लिनुपर्दथ्यो र त्यही ग¥यो, राजालाई सपरिवार आफ्नो दूतावासको माध्यमबाट आफ्नो पाहुना बनाएर ।
राजाले लडाइँ रोकेर वार्ताको आह्वान् नगरून्जेल बीपीको राजासँग भेट हुन पाएन । परिच्छेद २८ मा बीपी भन्छन्, ‘राजाको प्राइभेट सेक्रेटरी थिए, दयारामभक्त माथेमा । बडो मह¤वपूर्ण मान्छे थिए त्यसबेला । भन्थे, फुर्सत नै हु“दैन राजालाई । उनी हिन्दूस्तानको नियन्त्रणमा थिए र हिन्दूस्तानले मलाई के भेट्न दिन्थ्यो र ?’ बीपीको राजाका छोराहरुसँग भेट हुन्थ्यो, तर युवराजसँग भने भेट भएन । यो भेटमा रोक बीपीलाई मात्र थियो कि अन्य कांग्रेसीहरुले पनि भेट्न पाएका थिएनन्, त्यो भने किताबले बताएको छैन ।
त्यसबेला भारत संघ बन्ने प्रकृयामा थियो । भारतीय स्वतन्त्रता ऐनले बेलायतले स्वतन्त्र भारतमा हरेक भूभागलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको थियो र १९५० नेपाल–भारत मैत्री सन्धिले यसभन्दा पहिलेका नेपाल–भारतका सन्धिलाई अकाट्य गरेको थियो । यस्तोमा त्यसबेला स्थिर नेपाल हुनु भारतको हितमा हुने थिएन । त्यसैले, नेपाली कांग्रेसले सुरू गरेको क्रान्ति भारतको पनि थियो । बीपीको यत्रो क्षमतावान, प्रतिभावान व्यक्तित्वको आलोकमा आफ्नो र भारतको सम्बन्धको उकाली–ओरालीलाई लिएर व्यक्तिगत परिपे्रक्ष्यमा मात्र गरिएको चिन्तन अलि नपच्ने हुन्छ । यसलाई दुई मुलुक र दुवैको तत्कालीन परिस्थिति र स्वार्थको परिपे्रक्ष्यमा हेर्ने हो भने अनौठो केही देखिन्न ।
सात सालको क्रान्तिमा राजाको अवस्था तासको खेलको त्योे पत्ताजस्तो थियो, जो जसको हातमा भयो, त्यसैले बाजी जित्यो अर्थात् तुरूपको एक्कासरह । यस पूरा घटनाक्रममा राणाहरुको हातको तुरूपको एक्का भारतको हात लाग्यो । त्यसैले, क्रान्ति नेपाली कांग्रेस र श्री ३ सरकारबीच भए पनि सम्झौता भने श्री ५, श्री ३ र भारत सरकारबीच भयो ।
यस किताबको आधारमा भन्ने हो भने बीपीको भूमिका एक कर्मठ योद्धाको रह्यो । जब वार्ता आह्वान् भयो, बीपी–राजा भेट सहज भयो । राजाले बीपीलाई आफूसँगै काउचमा बसाले । बीपीको मनमा राजासँगै काउचमा बस्नु ठीक हैन भन्ने पसाइयो । राजालाई यसमा कुनै आपत्ति थिएन भन्ने कुरा त्यसपछिका त्रिभुवन–बीपी सम्बन्धले जनाउँछ । तर, त्यसबेला यो एक अर्थहीन कुराको औचित्य पुष्टि गर्नपट्टि बीपीको ध्यान भड्काइयो । त्यसैले, तीन पक्षबीच हुन लागेको सम्झौताको चिन्तन र त्यसका निमित्त गरिनु पर्ने भेटघाटलाई व्यक्तित्वको संघर्षमा अल्झाइएको पछिसम्म बीपीले पत्तो नपाउनु अनौठो कुरा हो !